Ogaden News Agency (ONA) – Gumaysiga oo Jab balaadhan loogu gaystay meela kala duwan oo dalka ka mid ah
Gumaysiga oo Jab balaadhan loogu gaystay meela kala duwan oo dalka ka mid ah
Waraka nagasoo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo aad u badan inay ka dhaceen meelo badan oo Ogadenia kamid ah, waxayna warku intaas kudarayaa in dagaaladaas ciidamada doolka ku jooga Ogadenia ee gumaysiga ah loogu awood sheegtay. Dagaaladan oo socday intii u dhexeysay 11-28 bishan Nov. 2013 oo cadawga khasaare balaadhan lagu gaadhsiiyay ayaa u dhacay sidan.
11/11/13 Garwaan iyo Babaas oo dagmada Danood ee Gobolka Doollo kawada tirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 11 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/11/13 Heedaan oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
18/11/13 Qudhaclay oo Shaygoosh katirsan iyo Walwaal oo Wardheer katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 8 askari 12 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/11/13 Dhabo oo Dagmada Dhanaan udhaw dagaal kudhexmaray ciidanka wadaniga xoraynta Ogadenia iyo kuwa cadawga waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/11/13 Garsaale iyo dhalaaguda oo Xamaro kawada tirsan iyo dagmada Danood ee Gobolka doolo dagaallo kakala dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 17 askari 27 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/11/13 Laandheer oo dagmada Sagag katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidanka cadawga oo halkaas kusugnaa waxaa ciidanka cadawga laga dhigay mid dhuma iyo mid dhaanraaca waxaana goobta lagaga dilay 18 askari 23 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/11/13 Hagoog oo Dhanaan katirsan iyo Laab oo dagmada Goday ee xarunta Gobolka Shabeelle katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada nacabka lagaga dilay 8 askari 10 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/11/13 Sudan oo Qabribayax katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
21/11/13 Malqaqa oo Galaalshe katirsan iyo Jiirmaygaag oo Sagag katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay inta lahubo 5 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/11/13 Gadhbalaayo oo Baabili udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidanka maxaysatada Itoobiya lagaga dilay 3 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/11/13 Hareeribarako oo dagmada Shilaabo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 22/11/13 Dhabarsarmaan oo Fiiq udhaw weerar gaadma ah oo ay CWXO kuqaadeen kuwa gumaysiga waxaykugaadh siiyeen khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
23/11/13 Banbaase iyo Haarcad oo Baabili kawada tirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 10 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
23/11/13 Xeronaagood oo Qabridahare udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aan wali faahfaahin laga helin.
24/11/13 Dhoodiwaal oo tuulada Galadiid ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay. Isla 24/11/13 Buuxisada oo Fiiq katirsan iyo Tufta oo Shaygoosh katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada nacabka lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
25/11/13 Waleenti oo Fiiq katirsan iyo Hadhqaboobe oo Qabridahare katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay. Isla 25/11/13 Maraacaato oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 5 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
25/11/13 Hagoog oo dagmada Dhanaan katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
26/11/13 Higlaalebiir oo Dhaan katirsan iyo Kuuscowl oo Dhagaxmadow katirsan dagaalo kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay inta lahubo 2 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
28/11/13 Yoocaale oo dagmada Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhanka kale 26 NOV Tuulada Basarxun oo dagmada Xamaro katirsan wuxuu dagaal ku dhaxmaray labo ciidan oo kuwa gumaysiga ah dagaalkan ayaa ka bilowday dad shacab ah oo ladoonayay in la dhibaateeyo waxuuna muranka ka bilowday anagaa latagayna iyo anagaa latagayna. Dagaalkan oo mudo socday ayaa waxay iskaga dileen 4 askari.
Sikastaba ha ahaatee dagaalada ladoonayo in lagu xoreeyo wadanka Ogadenia ayaa mudooyinkii udanbeeyay siikaraar qaatay waxayna noqdeen kuwo guulo badan laga soo hoyiyo.